Ellicott Dredges amin'ny hetsika Archives - Ellicott Dredges
Blog, Ellicott Dredges amin'ny hetsika
Ellicott Dredger dia manampy amin'ny seranana Palermo ao Kolombia
Ny fidirana amin'ny seranana dia zava-dehibe amin'ny fanondranana sy fanondranana entana manerana izao tontolo izao. Rehefa mihena ny fifamoivoizana noho ny sedimentation sy ny fananganana hafa, ny Ellicott Dredges no vahaolana. Ellicott 670-42 Dragon® Dredge no novidiana ary zatra mampiasa dredge Port Palermo ao amin'ny departemantan'i Magdalena any Kolombia.
370 Dragon Dredge hanombohana ny asa amin'ny tetik'asa lemaka
Logistics sy Fanampiana SA, mpiantoka ny fanondranana avy any Cotonou, Benin, dia nomena fifanekena iray nomen'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra mba hanaraha-maso ny tondra-drano amin'ny fizaran-taona any amin'ny faritra.
Famerenan'ny morontsiraka, Ellicott Dredges amin'ny hetsika
Grand Popo, Benin: Ny minisiteran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra dia nanolotra fifanarahana, novatsian'ny Banky Iraisam-pirenena, ho any amin'ny faritra afrikanina Afrikana Logistics sy fanampiana SA, hanesorana ny 100,000 metatra toradroa metatra toradroa avy amin'ny renirano Mono any Grand Popo. Benin. Ny Banky Iraisam-pirenena dia nankatoavin'ny famatsiam-bola $ 210 tapitrisa ho famatsiam-bola amin'ny tetikasa isam-paritra fantatra amin'ny anarana hoe West Africa Coastal Areas (WACA) Resilience Investment Program. Ny programa dia natao hiarovana amin'ny fitrandrahana amoron-dranomasina amin'ny alàlan'ny hetsika marobe, ao anatin'izany ny famerenana indray ny faritra mando, ny torapasika, ary ny fananganana ranomasina. Dadabe Popo, fantatra fa fikambanana manarato malaza, ...
Ny Seranan'i Siuslaw dia namaky Ellicott 360SL Mihetsiketsika amin'ny alàlan'ny Dredge Marina
16 Janoary 2020 - Miandry ny fahazoan-dàlana hanomboka ny rano ny renirano Siuslaw ny Crew mampiseho ny Oregon International Port of Coos Bay. Ny marina Siuslaw, ampiasain'ny Port of Siuslaw, dia milentika ao anaty tanimanga, fotaka ary landy maro izay nahangona folo taona mahery, ka sarotra ho an'ny sambo ny mandehandeha dimy kilaometatra mampitohy ny Reniranon'i Siuslaw mankany amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Ny Port of Siuslaw dia distrika manokana misy kaonty manokana izay miankina betsaka amin'ny fizahan-tany mpizahatany, toy ny fanatanjahan-tena sy ny varotra ara-barotra, fananganana sambo, valan-javaboary ary vala toby RV amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ....
Edgartown Mampiasa Ellicott 370 Dragon® Dredge hanesorana ny fasika ho an'ny tetik'asa fanondranana amoron-dranomasina
Ny komitin'ny Dredart dredge dia nanaiky ny hanaisotra fasika mihoatra ny 20,927 16,000 yd³ (370 metatra) avy amin'ny Sengekontacket Pond akaikin'ny tanimboaloboky an'i Marta ary mampiasa Series Ellicott® XNUMX Dragon® Dredge. Nanaiky ny fivarotana ilay vinavina ho an'ny tanàna akaikin'i Oak Bluffs, ny komity izay hampiasa ny fasika ho toy ny tetik'asa fikolokoloana amoron-dranomasina mba hamenoana ireo torolàlana amoron-tsiraka ao amin'ny vondron'olona eo an-toerana. Edgartown irery no tanàna ao amin'ny faritra manana dredge. Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, ny komity dredge dia nampiasa ny drogolo Ellicott hiara-miasa amin'ny nosy mpifanolo-bodirindrina hafa ...
Ellicott Series 1270 Dragon® Dredge dia ampiasaina hanesorana ny landy sy ny sediment avy ao amin'ny trano fitehirizan-tsiro hidroola
Tamin'ny taona 2018 ny kaontin'ny Millenium Challenge of Malawi (MCA-M) dia nanome an'i Ellicott Dredges fifanarahana tendro ho famatsiana Ellisott Series 1270 Dragon® dredge ho an'ny orinasa mpamokatra herinaratra Kapichira any Malawi. Ny Millennium Challenge Corporation (MCC), masoivohon'ny governemanta amerikanina dia niara-niasa mivantana tamin'ireo tompon'andraikitra avy any Malawi nandritra ny taona maro lasa izay mba hametrahana fototra matanjaka ahafahan'ny rafi-pahefana ao amin'ny firenena mandrindra ny tenany amin'ny fotoana maharitra. Ny ankamaroan'ny mponina ao Malawi dia miantehitra amin'ny herin'aratra izay loharanon'ny angovo voalohany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nitombo ny fananganana silt sy sediment tao amin'ny Reniranon'i Shire akaikin'ny Kapichira ...
Cutterhead Dredges manomboka ny Altamira Port Dredging Project - Ellicott Dredges
Ny complexe seranan'i Altamira ao amin'ny fanjakan'i Tamaulipas, Mexico, dia iray amin'ireo seranan-tsambo efatra lehibe indrindra any Mexico. Ny Altamira dia tafiditra ao anaty orinasa lehibe natokana ho an'ny indostria voatokana toy ny LNG, ny petrochemical, ny indostria ary ny entana. Amin'izao fotoana izao, dredge Ellicott roa no miasa na efa manomboka hanomboka tetikasa fananganana seranan-tsambo any Altamira. Ny dredge Ellicott Series 670 Dragon® dia ampiasaina amin'izao fotoana izao mba hikarakarana tsy tapaka amin'ny fivoahana sy fantsom-pidirana ho an'ny terminal indostrian'ny tsy miankina. Raha ny marina, ny dredge cutterhead antonony dia misy paompy 14 "x14" miaraka amina herin'ny 800 HP ...
Angady fanodinana dragona efa zatra natao tany Dredge Marina akaikin'i Puerto Vallarta, Mexico
Tamin'ny taona 2017 Ellicott Dredges, mpamokatra dredge Baltimore, Maryland (USA) dia nitondra dredge Series 460SL Swinging Dragon® amin'ny mpanjifa iray any Puerto Vallarta, Mexico. Ny dredge mavesatra dia ampiasaina amin'izao fotoana izao hanalàna ny sediment amin'ny marina marina eo an-toerana sy ny zotra fitetezana izay mifandray mivantana amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Ny mpanjifa dia nisafidy ny faha-460SL Swinging Dragon® dredge noho ny fahafahan'ny dredge kely mandeha amin'ny làlana tery sy tery ary tery. any amin'ny faritra toa ny lakan'ny sambo ary mihazona ny halalin'ny fantsona ilaina ilaina ho an'ny sambo lehibe kokoa toy ny lakana tsy miankina amin'ny fiara mba hivezivezena miverina tsy amin'antony. Izany ...
Saintsaino ve hoe inona no ilaina amin'ny fananganana tohodrano?
Hatramin'ny nanombohan'ny orinasa, Ellicott Dredges dia nanana fotoana tsy manam-paharoa mba hanamboarana hantsana namboarina ho an'ny mpanjifantsika izay heverina ho mihoatra ny halemem-pandrindrana nentim-paharazana. Ny lahatsary farany an'ny orinasa, "Ellicott's Major Projects Group," dia manasongadina ny faneken'ny Ellicott hanangana dredge mavesatra azo itokisana. Ho fanampin'izay, ny mpijery dia hanana fotoana hahitana ny ekipa ataontsika rehefa miara-miasa izy ireo hamokatra dredge iray izay mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifa. Ny fividianana dredge dia mety maharesy ny olona sasany. Amin'ny maha orinasa anay, dia mirehareha re izahay amin'ny fanampiana ny mpanjifanay hahita ny dredge mety. Ny ekipanay dia miara-miasa mivantana amin'ny mpanjifa hanampy azy ireo ...
Antony telo ny antony atokisan’ny mpanjifa ny fananganana ny olobeny
Tany am-piandohan'ity taona ity, Ellicott Dredges, mpamokatra kamory Baltimore, Md (USA) dia nitondra dredge ho an'ny mpanjifa iray. Ny dredge Series 370HP Dragon® dia mahavita mihady hatramin'ny 50 ft. (15.2 m). Koa, ny dredge kely dia hampiasaina amina fasika izay amidy amina orinasa mpanamboatra maro samihafa. Nisafidy ny fantsom-pivarotan-tsolika Ellicott (10 mm) ny fantsom-pivarotan-tsolika Elcott 250-inch (1 mm) noho ny antony telo telo: mora kokoa ho an'ny tompon'ny dredge voalohany indrindra 2. Ity tsy mora ity ...